Crossword, Pinda uye unakirwe kubva kuemulator.online
Muchinjiko. Iye zvino tave kuzokuratidza zvese zvaunoda kuti uzive kuti unzwisise uyu mutambo wakanaka. Kubva pane zvarinoreva, mavambo ayo, mabhenefiti ayo, iwo mapikicha mamodheru aripo uye zvakare mazano ekugadzirisa nekukurumidza asi nekukurumidza.
Crossword: Maitiro ekutamba poindi nepfungwa 😀
Kugadzira a Muchinjiko online mahara, iwe unongofanirwa kudaro tevera iyi rairo nhanho nhanho:
Ukangopinda saiti, mutambo unozoratidzwa pachiratidziri. Unofanira chete sarudza mutauro uye chikamu chaunonyanya kufarira. Pakati pezvikamu zvaunogona kuwana ndeizvi: Zvibereko, makomputa, mhuka Nyika, Miriwo uye Mumhanzi
Zvino, iwe unowana mamwe anobatsira mabhatani. Unogona "Wedzera kana bvisa ruzha", Ipa bhatani"tamba"Uye tanga kutamba, unogona"Mira zvishoma"uye"Kutangazve"Chero nguva, Wedzera saizi yesikirini kana zvimwe kubuda mutambo.
Iyo inokwanisa kubatanidza chimwe nechimwe nechimwe chezvidimbu nenzira yekuti iyo chifananidzo chawakasarudza chigadzirwe.
Mushure mekuzadza mutambo, tinya "kubuda mutambo" kuita mamwe mazita.
¿Maitiro ekugadzirisa crossword?🖊
Iye zvino tinokuratidza zvisere zvisere izvo zvinokubatsira iwe kufambira mberi nzira yako yekuita crosswords:
1- Verenga yega uye yega yega yemakwara
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kana uchitanga chinjiso ndechekuti verengai yega yega clue kubva kumusoro kusvika pasi uye zvakare isa mhinduro dzakareruka. Zvinokurudzirwa kuenderera mune yakatarwa nzira. Kubva kuruboshwe kurudyi kana zvinopesana wobva waenderera nenzira kubva kumusoro kusvika pasi. Unogona kuva nechokwadi chekuti iwe wakanyora yega uye yega inozivikanwa mhinduro.
Kana, kune rimwe divi, iwe waifanira kusarudza iyo mibvunzo zvisina tsarukano uye kuiyambuka, pamwe mamwe mabhokisi akareruka anopfuura pamberi pako usina kuona.
Paunenge wapedza denderedzwa rekutanga remuchinjikwa, iwe unofanirwa kuenda zvino kumibvunzo yakaoma iyo yausati wagona kupindura. Izvi zvinoita kuti kufungidzira kuve nyore kune aya makwere uye iwe unogona nyore nyore kutanga kechipiri kutenderera.
Iye zvino zvave nyore kupindura mibvunzo inongopa mhinduro dzakawanda dzinogona kuitika. Kuti ushande semuenzaniso, kana iwe uchitsvaga a chisazitasingwi chine mavara matatu , unogona kusarudza pakati PAMI, IWE, US, nezvimwewo. Kana iwe watopedza tsamba imwechete kana mbiri neround rekutanga, dzimwe sarudzo dzinogona kubviswa nekukurumidza uye mune yakanakisa nyaya, kwasara mhinduro imwe chete.
2- Shandisa mamaki
Kana kuchine mhinduro dzakawandisa dzemubvunzo kana, kazhinji, hauna chokwadi nezvemhinduro, tentatively pinda iro izwi flimsily nepeni. Kana, paunenge uchiramba uchigadzirisa dambanemazwi, mamwe mavara anowanikwa kune iro izwi rauri kutsvaga, iwe uchaona kana pfungwa yako yekutanga yaive yechokwadi kana kwete.
Dzimwe nguva zvakanaka kumirira kudzamara tsamba zhinji dzapihwa izwi risingabvunzwe. Kana iri imwe chete, senge Semuenzaniso Y futi, mukana wacho wakanyanya kukwirira zvekuti misiyano yakawanda inogona kushanda. Nezviri kuzove zvirinani kuti iwe mira zvishoma. Kana iwe uine chokwadi chekuti izwi rauri kuda rinokwana, unogona kuritevera nemazvo.
Kana iwe wakabatirirwa pane izwi kwenguva yakareba uye usingakwanise kuenda kumberi kuburikidza neiyo crossword, haufanire kutya Kumbozorora. Wobva waisa zvakavanzika padivi, bvisa musoro wako woita chimwe chinhu.
Zvinoshamisika kuti sei, mushure menguva yakati rebei kana uchiverenga mubvunzo zvakare, kamwe kamwe iwe une kushamisika mhedzisiro uko iwe wakateyiwa kare. Iyo nguva chinhu haina kukoshesa pakugadzirisa muchinjiko chero zvakadaro. Chinokosha ndechekuti iro dambudziko nderekuvaraidza.
4- Tsvaga iyo yekuvhara nyaya
Kwete yega yega yega crossword ine yakatarwa musoro wenyaya Zvimwe kana chikonzero kana chinyorwa chikapihwa mumusoro, unogona kutarisira kuti chimwe chikamu chemibvunzo nemhinduro chakanangiswa kune icho chaizvo.
Saka izvi hazvireve kuti rimwe nerimwe izwi rinobva paari. Kunyanya, mazwi madiki ekuzadza, senge zvisazitasingwi, zvirevo, nezvimwe zvakadaro, hazvizoenderana nenyaya. Asi kana paine theme yeKisimusi kana yechando mumusoro wenyaya, muti une mavara mashanu ungangodaro uri MOTO kupfuura OAK.
Izvi zvinonyanya kubatsira kana iwe usingakwanise kuenda kumberi nemubvunzo nemhinduro dzakawanda dzinogona kuitika. Saka chengeta musoro wenyaya mupfungwa, unozokutungamira munzira kwayo.
5- Tsvaga mazwi kubva kune mimwe mitauro
ari crosswords ivo vanowanzo shandiswa kutarisa kumusoro mazwi mumitauro yekune dzimwe nyika. Nekudaro, iwe unogona kuve nechokwadi chekuti mune zvese haizombove yakanyanya kuomesa duramazwi. Kazhinji yenguva, hazvisi zvekuziva mumwe mutauro zvakakwana kugadzirisa mhinduro. Asi, zvine mukurumbira mazwi madiki anogona kunge akauya mumutauro wako mukushandisa kwakawanda mutauro. Ita shuwa kuti une mamwe mavara ezwi rauri kutsvaga, ipapo zvichave nyore kufungidzira.
6- Tsvaga rudzii rwezwi rauri kutsvaga
Dzimwe nguva zvinogona shandisa mucherechedzo wemubvunzo kufanoona chaizvo muchikamu chekupokana mhinduro yacho inofanira kusarudzwa. Izvi zvinokupa iwe mukana wekunyora magumo zvakachengeteka. Kana uchitsvaga chiito, vanowanzo guma nenzira imwecheteyo. Izvo zvakangofanana ne mazwi mazhinji. Kana iwe ukatsvaga kuwanda kweshoko, zvinonyatso kuperera mukati -i kana -s.
Kune rimwe divi, unogona kuishandisa kuisa mabhii ekupedzisira ezwi, kunyangwe iwe usina chokwadi neshoko rese. Kune rimwe divi, mavara mashoma ari panoperera izwi anobatsira kufungidzira mamwe mazwi anoiyambuka nekukurumidza. Nekudaro, kana iwe usina chokwadi nezve magumo akakodzera, nyora izvozvi.
7- Zvinoreva zvakawanda zveizwi
Nemimwe mibvunzo iwe unofanirwa kutarisa kanopfuura kamwe chete. Zvakanaka pamwe iyo bvunza pachako uve wakajeka. Kutanga, nekuda kwekuti izwi riri mumubvunzo rinogona kunge riine zvirevo zvakasiyana, kushanda semuenzaniso muBanco. Kana iwe ukabvunzwa zvaunoita mubhangi, iwe unofanirwa kutora kufunga kuti zvinogona kureva zvese zvigaro kubhengi uye yemari mubatanidzwa bhangi.
Ipapo mhinduro yaigona "gara ipapo" O tsime "investa mari ".
Iko kune zvakare mukana wekuti katsamba kanonzwisiswa zvirevo kana chirevo. Kufungisisa kukona kona dzimwe nguva kunodiwa pano. Usawanze nguva dzose uye nguva dzose kutora zvinowanzoitika zvinoreva mazwi, asi zvakare edza kufunga nezve mamwe matanho. Kuti ushande semuenzaniso, kana iwe ukakumbirwa nzira inoenda kuRoma, zvirokwazvo haufanire kutumidza mugwagwa kana nzira, asi mhinduro inogona kunge iri YOSE, maererano neshoko rinoti "Migwagwa yose inotungamira kuRoma".
8- Kana pasina chinobatsira ...
Kana iwe zvino watevera ese aya matipi uye uchiri kutadza kuenderera nemamwe mazwi, hapana chikonzero chekukumbira mamwe matipi. Ngazvive zvakadaro kumbira mazano kune dzimwe shamwari kana vechinyakare vanozivana kana kushandisa echinyakare kana edhijitari mabhuku ekuverenga.
Saka ngazvive saizvozvo maduramazwi, madikiziki kana maenisaikoropidhiya, mumwe wavo angangodaro ari pamba. Nekudaro, kana iwe uri kuenda uye kugadzirisa iro crossword kune imwe nzvimbo nzvimbo, unogona kusarudza akawanda online zvinowanika zvepuzzle rubatsiro.
Tinovimba kuti ruzivo urwu rwakabatsira kwauri. Uye, kana iwe uchinzwa kugadzirira izvozvi, tinokumirira kuti utange kuita yako crossword puzzle.
Chii chinonzi crossword?📚
ari crosswords Ivo mutambo wekupembera wakaumbwa nematanho emakwere asina chinhu ayo aunofanirwa kupedzisa mutambo. Tsvaga izwi rega rega uye rega uchishandisa iwo mahara matipi Sezvo mamwe mazwi anopedzwa, mamwe mavara mune mamwe mazwi anozviratidza otomatiki, zvichiita kuti kugadzirisa kuve nyore. Zvakajairika mumapepanhau nemagazeti uye, nekudaro, ivo zvakare vanobudirira paInternet.
La Crossword chinetso chinoshanduka zvinoenderana nemafomati uye nhamba yemazwi. Iko kushoma mazwi kuyambuka uye kuwanda mazwi mutambo une, ndiko kuwedzera mikana yekuti mutambo uchave wakaomesesa. Pamusoro peizvi, mwero wekuoma kunzwisisa unoshanduka zvinoenderana nemusoro wenyaya, saka kana iwe ukadzidza kutamba, sarudza musoro waunoda uye une ruzivo rwawo.
Crosswords izvozvi chimwe chezvinhu zvinonyanya kufarirwa, kunyangwe ivo varasikirwa nenzvimbo pamberi pemimwe mitambo yakadai Sudoku. Iko hakuna chero bepanhau kana gazeti isina chikamu chekuvaraidza icho chinosanganisira imwe kana zvimwe zvinopesana nemazwi. Asi zvese zvakatanga panguva ipi?
El yekutanga crossword izvo zvatinoziva zvakaitika musi waZvita XNUMX, XNUMX, apo pepanhau Svondo New York World akadhindisa chirahwe chinonzi "crossword puzzle", Yakagadzirwa na Arthur Wynne, munyori wechiChirungu kubva kuLiverpool. Iyo dambanemazwi yakarova pakarepo neruzhinji uye ikave kukwezva kwevhiki kuburitsa.
Pasinei nokubudirira kwayo, Nyika ndiyo yega bepanhau rakaburitsa iyi pikicha kusvika 1924, panguva iyo muparidzi wekutanga akaburitsa kuunganidzwa kwakazara kwemazita epamhepo akaburitswa nekufamba kwenguva neWorld, mumhando yemabhuku. Simon & Schuster yakatanga upenzi hutsva hwaizove mumwe wevaparidzi vakakura kwazvo pasi rino.
Izwi board- Rumwe runyorwa rweacrostic runosanganisira seti yetsamba dzakatsanangurwa pachivara 'grid', kuitira kuti iwo iwo mazwi akafanana anogona kuverengwa zvese zvakatwasuka uye zvichidzika, zvakatangira kunguva dzekare.
Tateguru wekare kupfuura vese anozivikanwa weiyo crossword puzzle akawanikwa muguta reThebes muguva remupristi mukuru Neb-wenenef akagadzwa kuita iro basa mukati megore rekutanga rekutonga kwaRamses II, pharao wedzinza reXNUMX (XNUMX - zviuru mazana maviri pamberi paKristu). Kurutivi rworuboshwe rwepaseji inotungamira mukamuri yemukati yeguva, a ibwe hombe raive rakanyorwa mifananidzo yevanhu uye nhevedzano yemahieroglyphs.
Chinyorwa ichi chine chete nhevedzano yeminamato inorumbidzwa pamusoro pamwari Osiris, mudziviriri wemufi, sezvaiwanzoitika panguva iyoyo. Zvimwe nzira iyo hieroglyphs yakarongedzwa yakashamisika vanochera matongo. Pakazara pane mitsara gumi neimwe yakatwasuka. Pakati chaipo pavo, ikholamu yakamisikidzwa kuratidza kuti mahieroglyphs, akaverengwa akatwasuka, zvine musoro.
Kubva ipapo yakaenderera ichikura pasirese, ichiva inokosha mune chero gazette kana pepanhau.
Mazita emuchinjikwa ane mhando dzakasiyana. Izvi zvinogona kuiswa muzvisikwa, zvemifananidzo, zvezita, zvisina kunaka, nekuwedzera, uye nekufungidzira. Mumachinjiro ane "yakapusa" nhanho, iyo tsananguro yezita, kuchiteverwa nokuuka. Mune avo vane "yakaoma" nhanho, mamiriro acho anodzoserwa: iyo tsananguro nekuuka inoteverwa neyezita.
Nekudaro, mazwi emuchinjikwa anoratidzwa muzvikamu zvakasiyana. Ngatione zvavari:
Icho chimiro chemuchinjiko umo hapana matema matema, uko iye anotora chikamu iye amene anofanira kuwana kwaanogara.
Mushanduri kana Bilingual crossword
Ichi muchinjiko chakanangana nekudzidza a mutauro mutsva.
Iyo mhando yehunhu umo rimwe nerimwe bhokisi rinofanira kuiswa syllable pachinzvimbo chebhii rimwe.
Crossword ine hunhu
Rudzi urwu rwechinjiso rwakakurumbira nhasi. Inosanganisira mufananidzo wehunhu uko imwe kana kuwanda kwedudziro inowirirana nezita kana mazita akafanana.
Mune ino modality yakaoma inoshandisa mutsara unovanza mirairo kuvaka kana kuwana mhinduro pakati pemashoko echirevo. Izvo zvinowanzoitika zvakajairika muUK uko chirevo kubva kuThe Times chinomira.